Konferansa fampandrosoana maharitra any Karaiba 2019 hifantoka amin'ny risika amin'ny toetrandro, olana hafa maika
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Konferansa fampandrosoana maharitra any Karaiba 2019 hifantoka amin'ny risika amin'ny toetrandro, olana hafa maika
Ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO), iaraha-miasa amin'ny St.Vincent sy ny Grenadines Tourism Authority (SVGTA), dia hanome sehatra ho an'ny faritra hamahana ny sasany amin'ireo olana maika indrindra atrehin'ny fizahan-tany any Karaiba amin'ny fihaonambe praiminisitra maharitra momba ny maharitra fampandrosoana ny fizahantany amin'ny volana aogositra.
Amin'ny fihaonambe iraisam-pirenena voalohany ho an'ny fizahan-tany any St.Vincent and the Grenadines (SVG), ny Fihaonambe momba ny fizahan-tany maharitra maharitra any Caribeana, izay fantatra amin'ny hoe Fihaonambe fizahan-tany maharitra (# STC2019) dia voatondro ho an'ny 2019-27 aogositra ao amin'ny Hotely Beachcombers any St.Vincent.
Eo ambanin'ny lohahevitra 'Fihazonana ny mizana marina: fampandrosoana ny fizahantany amin'ny vanim-potoanan'ny fahasamihafana', ny manam-pahaizana momba ny indostria dia hamaly ny filana maika ny vokatra fizahan-tany mampiovaova, manakorontana, ary mamerina amin'ny laoniny hiatrehana ireo fanamby tsy mitsaha-mitombo.
"Miatrika tsindry mafy ny toekarena Karaiba hamaly ny fanovana misy fiantraikany amin'ny orinasam-pizahan-tany ary ilaina ny fanavaozana hamahana ny raharaha maika toy ny risika amin'ny toetr'andro, ny fihenan'ny fako, ny fidiran'ny vondron'olona ary ny antsoina hoe internet momba ny zavatra," hoy i Amanda Charles, manam-pahaizana manokana momba ny fampandrosoana fizahan-tany ny CTO. "STC 2019 dia ho lehibe amin'ny fampivoarana ireo olana toy izany izay misy fiatraikany amin'ny fitohizan'ny fizahantany Karaiba amin'ny ho avy."
St Vincent sy ny Grenadines dia hampiantrano ny STC ao anatin'ny fanentanana nasionaly mankany amin'ny tany maitso maitso sy mateza kokoa, ao anatin'izany ny fananganana tohodrano hafanana any St.Vincent mba hamenoana ny tanjaky ny angovo sy ny angovo avy amin'ny masoandro ary ny famerenana amin'ny laoniny ny Ashton Lagoon ao Union Island.
Ny tale jeneralin'ny SVGTA, Glen Beache dia nanamarika ny maha-zava-dehibe ny fampiantranoana ny fihaonambe tamin'ny fotoana nandokoan'ny Firenena Mikambana sary maloka momba ny rafi-pitantanana fiainana voajanahary eto an-tany, ao anatin'izany ny fiainana an-dranomasina sy ny tontolo iainana voajanahary.
"Ilaina ny filan'ny toerana itodiana any Karaiba hahitana modely fampandrosoana izay miankina betsaka amin'ny faharetana amin'ny toerana ilaina dia ilaina ary noho izany dia tsy maintsy jerentsika tsara ny fomba kasaina, hitantanana ary hamidy ny fampandrosoana ny fizahan-tany any amin'ny toerana itodiana," hoy i Beache. "St. Faly i Vincent sy ireo Grenadines nampiantrano ny STC 2019, amin'ny fotoana tadiavinay hitazonana ny fifandanjana sy hitazomana ny lazan'ny SVG ho toerana tsy misy tohiny ”.
Ny ahiahy voalohany sy laharam-pahamehana ho an'ny Karaiba dia ny fanamafisana ny fiomanana sy ny faharetana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Mitovy lanja amin'izany ny fanovana ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanjifa izay mitaky ny sehatry ny fizahan-tany any amin'ny faritra mba ho malina kokoa satria mifandraika amin'ny drafitra fizahan-tany sy ny fitantanana loharanom-bola.
Fepetra isam-paritra sy fomba fanao tsara indrindra amin'ny fizahantany miorina amin'ny vondrom-piarahamonina, teknolojia ara-bola ho an'ny orinasa antonony, madinidinika sy bitika, fanavaozana ny asa aman-draharaha ary ny fifaninanana eo amin'ny toeran-kaleha dia hifantohana mandritra ny roa andro ny dinika. Ny mpandray anjara koa dia hiaina fitsangatsanganana mandritra ny tontolo andro handrobohana ny tenany amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Ireo mpandahateny dia hiresaka ny fomba ahafahan'ny faritra mamaly ny fanamby sy ny fotoana atolotry ny fitomboan'ny fifaninanana, ny fanovana ny fitakian'ny mpanjifa ary ny fividianana ny safidin'ny media sosialy sy ny sehatra tambajotra, ny toekarena fizarana ary ny teknolojia ara-bola.
Hizaha ireo manam-pahaizana ny fomba hanatanterahana izany amin'ny fomba izay manatsara ny fivelomana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny famoronana traikefa fizahan-tany vaovao, isan-karazany, ary manavao amin'ny alàlan'ny fananana voajanahary sy namboarin'olona avy amin'ny fiarahamonina Karaiba.
Bruxelles amin'ny bisikileta: mankalaza bisikileta ny renivohitra eropeana ary manome voninahitra ny lova ara-kolontsaina
Miaraka amin'ny fanaterana jet vaovao 71, ny TAP Air Portugal dia mandefa sidina vaovao any Chicago, San Francisco & Washington, DC